Way “Dhagaxowday” Kadib Markii Kaneeco Ay Qaniintay. - Ceelhuur.com | Ceelhuur.com
Home » Caafimaadka » Way “Dhagaxowday” Kadib Markii Kaneeco Ay Qaniintay. Date :November 27, 2017 Author :Cali Yare 18 views
Dhakhaatiirta ayaa ogaaday in haweenay ka tirsan jamciyadda “Animal Welfare” ay qaadday cudur naadir ah oo aan wax dawo ah la hayn.
Jiiradada Independent ee kasoo baxda gudaha dalka Ingiriiska ayaa qortay in dhakhaatiirtu ay ogaadeen in Rebecca Willers oo 37 jir ah uu ku dhacay cudur uu haraggu dhagaxoobayo si tartiib tartiib ah “diffuse systemic scleroderma“, cudurkan ayaa 10% dadka uu ku dhacaa ay u dhintaan muddo 5sanno ah gudahood.
Haweenaydan ayaa booqatay jasiisadda Sumatra ee gudaha dalka Indonesia sanadkii 2015, markaas oo ay ka qeybqaadaneysay mashruuc lagu badbaadinayay shabeelka nooc ka mid ah oo 500 xabo oo qura adduunka kusoo hartay. Khubarada ayaa aaminsan in booqashada jasiiradda ay kaneeco kasoo qaniintay, taas oo cudurka ay ka qaaddan.
Willers markii ay Ingiriiska dib ugu noqotay ayaa cudurro kala duwan ay ku dhaceen, intaa kadibna waxaa kusoo baxay cudurkan ay hadda la tacaaleyso.
Cudurkan ayaa waxa uu ku keenay in uu dhagaxoobo jirkeeda sida ay tiri, “Waxaad mooddaa inaan dhagax taabanayo”, dhakhtarka ayaa u sheegay in cudurkani uu jirka oo dhan ku faafayo, waxayna leedahay “Xitaa nadaafadda ilkaha ayaa igu adkaatay.”maxaa yeelay waxay dareemaysaa in gacanteedu ay dhagax noqdeen.
Haweenaydan ayaa goosatay iney lacata ay kaydsatay iyo kuwa kale ee ay ka helayso iibinta gurigeeda ay daawo ku raadsato si ay nafteeda u badbaadiso.
Hoos Ka daawo Sawirka Haweenaydan